पार्टीमा जुँगाको लडाईँ : परालको आगो हो कि भुसको ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
पार्टीमा जुँगाको लडाईँ : परालको आगो हो कि भुसको ?
सत्तारुढ ने क पाभित्र कलह व्याप्त छ, त्यहाँ शीतयुद्ध छ । ओलीको समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने सवालमा पक्ष–विपक्ष बाँडिएको छ ।नेपाली कांग्रेसभित्र त्यही रोग व्याप्त छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका विभाग गठन नगरेर सबैलाई त्यसैको लोभमा हिँडाइरहेका छन् । अर्को महाधिवेशन हुने बेला आईसकेको छ । तर पार्टीले संगठनात्मक पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।
पार्टी फुट्ला भन्ने डर र चिन्ता दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा छ, यद्यपि नेताहरू पार्टी फुट्न नदिने भन्छन् । पार्टी फुट्नु भनेको साइनबोर्ड दुईफ्याक बनाउनु वा झन्डा च्यात्नु होइन, भावनामा फुट र सङ्गठनमा गुटवाजी हो । माओवादी फुटेर ५ टुक्रा भयो ।
वैद्य, बाबुराम, मातृका, विप्लब आदिका चुला–चौका हुनथालेपछि आफ्नो गुटलाई माओवादीको केन्द्र भनी दावी गर्दैआएका प्रचण्डले पार्टी लगेर ओलीको चरणमा बुझाईदिए । आज सत्तामा बसेर ‘समृद्ध नेपाल सृुखी नेपाली’ को नारा लगाउने पार्टी हँसिया–हथौडावाला लालझन्डा हो भने ‘जनयुद्ध जारी छ’ भन्दै समाजमा लुटपाट, हत्या र चन्दा आतंक मच्चाउने पनि हँसिया–हथौडावाला लालझन्डा बाकेको कम्युनिस्ट पार्टी नै छ ।
सत्तारुढ ने क पामा भुसको आगो छ, कांग्रेसभित्र परालको आगो छ । माओवादीको शत्रु माओवादी भएर जिल्लाजिल्लामा ‘लालआँखे जनवाद’ को पक्षमा आपसी बोलचाल बन्द, पानी बाराबार, कुटाकुट, बहिष्कारका गतिविधि नभएपनि मुलुकको सबभन्दा जेठो र लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र त्यस्तो छैन । बरू यसमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उछिनेर बेढङ्गी राजनीतिक शैलीले बिगारेको देखिन्छ ।
लोकतन्त्र केवल प्रतीक होइन, फेशन होइन, नारा होइन, चियागफ होइन । अल्पमतमाथि बहुमतको स्वेच्छाचारी शासन होइन । लोकतन्त्र भनेको प्रतिबद्धता, पद्धति, विचार, आचरण र प्रक्रिया हो भन्ने कुरा ब्यवहारद्वारा व्यक्त हुनुपर्ने हो । निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूका साहसमाथि उभिएर अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्नुहँुदैन भन्ने न्यूनतम जिम्मेवारी नेतृत्वमा हुनुपथ्र्यो । तर कांग्रेसका नेताहरूमा यो चेत पलाउन सकेन । बरू बिरालाको टाउकामा सिंग–जुरो पलाउला, तर कांग्रेसका नेताहरू बुद्धिबंगारो नपलाई मर्ने भए ।
पार्टीभित्र न्यायपद्धति र सहमतिको राजनीतिक संस्कारलाई बिथोलेर विधिको शासन र समृद्धिको बाटो बन्न सक्दैन, तर त्यस्तै भइरहेको छ । घरभित्र किचलो मच्चाएर र आफ्नै पार्टीलाई एकजूट राख्न नसक्नेले राष्ट्रिय एकता सार्थक कसरी कायम गर्न सक्छ ? पार्टीका झगडियाहरू आ–आफ्ना औचित्य बलियो बनाउन लागिपरेका छन्, तर नागरिक समाजले पनि हेरिरहेको छ ।
केही दिनअघि वीरगञ्ज पुगेर डेढसय किलोको माला लगाएका कांग्रेस सभापति देउवाले डा. शशांक, डा. शेखर र सुजाता कोइरालाहरूउपर पाँडे–गाली गर्दै “कांग्रेस पार्टी कोइरालाहरूको वपौती होइन” भनिदिए । उनको त्यो आक्रोशभन्दा पनि पराजित मानसिकता, हतास र आत्मनाश मनोदशाको द्योतक थियो र साथै थियो सुसंस्कारको अनिकाल । उनी फागुन २३ गते विराटनगर पुगेर पनि त्यस्तै स्तरहिन मिजासमा देखा परे ।
ने क पा होस् वा कांग्रेस, दुवै पार्टीभित्र वैचारिक शक्तिको होइन, जसको शक्ति उसको भक्ति स्थापित गर्ने विचारविहिन तथा अराजक वातावरण विकसित भएको छ । लोकतन्त्रको लक्षण होइन यो । लोकतन्त्रको संरक्षक नेपाली कांग्रेस, लोकतन्त्रका उपभोक्ता अन्य पार्टीहरू भन्ने जनता पनि अब हैरान भइसके ।
सरकारलाई तह लगाउने र लोकतान्त्रिक विधिको पालन गर्ने गराउने विषयमा अरूका आँखा कांग्रेसतिर छन्, तर कांग्रेसको आँगनमा परस्परमा यदुवंशी मारामार चलिरहेको छ । एकथरिलाई डाँडो कटाउने र अर्कोथरिलाई राजपाट लिने तमासा नै अहिलेको क्षोभलाग्दो अवस्था हो । लोकतन्त्रको संरक्षक र संवाहक पार्टी भनिएको कांग्रेसभित्रै यस्ता तमासा भएपछि अरूसँग के आशा गर्ने ? पार्टी सभापतिका लागि सबै कार्यकर्ताहरू बराबर हुनुपर्ने र सभापति देउवाले सबै पक्षको कुरा धैर्यताका साथ सुनेर मिलाएर समेट्नु पर्ने हो । तर कांग्रेसमा कार्यकर्ता हुनपनि नसुहाउने गरी सबभन्दा नालायक सभापति देउवा नै हुँदैछन् ।
फुट अवश्यम्भावी हुँदै गएपछि जनताको निराशा र अविश्वास निकै बढेर गएको विगतका अनुभवले शिक्षा दिनुपर्ने हो । अर्को ठूलो दल सत्तारुढ नेकपाभित्रको खुट्टा तानातान, विवाद र विग्रहले देशमा दुर्भाग्य नै निम्त्याइरहेको छ । दुईतिहाईको नजिक शक्ति बोकेको त्यो पार्टीको सरकार यति अकर्मण्य र कमजोर हुनुको कारण घर झगडा नै हो ।
त्यो पार्टीले सत्ताको अति आशक्तिलाई नियन्त्रण गरेर जनमुखी विकासका एजेण्डालाई पूरा गर्न ध्यान लगाएको जनतालाई महसुस भएमात्र जनविश्वासको सार्थकता रहनेछ । यस्ता कुरा पार्टीहरूलाई सम्झाइरहनु पर्ने होइनन्, कुनैपनि जनमुखी पार्टीको लागि बाह«खरी र राजनीतिक वर्णमालाका प्रारम्भिक संस्कारगत नीति हुन् । सुध्रिने मति छैन भने यिनले इज्जतपूर्वक हटिदिनु बाहेक राजनीतिमा अरु विकल्प छैन ।